सत्य-स्वरूपको 'मैसाव' (भिडियो)
प्रकाशित : शुक्रबार, मङि्सर १२, २०७७०७:४१
संगीत । गायकद्वय सत्यराज र स्वरूपराज आचार्यको स्वर रहेको गीत ‘मैसाव’ सार्वजनिक गरिएको छ । कवाली शैलीको रोमान्टिक गीतको भिडियो पनि त्यहिँ अनुरुप तयार गरिएको छ । यसमा संगीत पनि सत्य स्वरूपकै रहेको छ भने शब्द लेख्नमा यी दुइ दाजुभाईलाई अमृत खतिवडाले साथ् दिएका छन् । राजखानदानमा प्रयोग हुने उच्च आदरार्थी शव्दहरुले भरिपूर्ण गीत सुन्दा जति आनन्द आउँछ, त्यती नै मज्जा यसको आकर्षक म्युजिक भिडियोले दिन्छ।
बिहेका लागि राजकुमारीलाई हेर्न पुगेका दुई राजकुमारको प्रवेशपछि दरारमा चलेको कवाली प्रस्तुत गरिएको म्युजिक भिडियोमा चक्लेटी हिरो पल शाह दोहोरो भूमिकामा छन्। त्यसै गरी राजकुमारीको भूमिकामा सिक्कीमेली सुन्दरी छुकिला शेर्पालाई प्रस्तुत गरिएको छ। कोरियोग्राफर कविराज गहतराजको निर्देशनमा तयार भएको यसको म्युजिक भिडियो दरवारिया शैलीमा निर्माण गरिएको छ। झकिझकाउ र चमक दमक प्रकाश व्यबस्थापनका साथ सुदीप बरालको छायांकन कलाले भिडियोलाई उत्कृष्ट बनाउन सघाएको छ भने आलिया गिरीको पहिरन डिजाइनले कविराजको दरवारभित्रको सांगितीक कार्यक्रमको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन सघाएको छ।
कैलाश राई (सिक्कीम) द्वारा निर्मित भिडियोमा कोरियोग्राफी दीपकराज सुनार, सम्पादन अर्जुन जिसी, भिएफएक्स सत्यम राना, कलर रेनिष फागोको रहेको छ। ‘यो हाम्रो ३ वर्षपछिको एलबम होे । वास्तवमा हामीले यो गीत अमेरिकाको सांगितीक यात्राका क्रममा बनाएका थियौँ । यसको कम्पोजचाहिँ कवाली गजल टाइपको छ, एरेञ्जमेन्टचाहिँ मोडर्न डान्सिङ नम्बरमा गरिएको छ’ स्वरुपराज भन्छन्। म्युजिक भिडियोका छायांकार सुदीप बराल गीतअनुसार निर्देशकको थिमसँग मिल्ने गरी भिडियो उतारिएको बताए ।
अनुष्काको फिल्म अमेजनमा ?
साम्तेनको नयाँ फिल्म ‘च च हुई’
राजेश भन्छन् ,’अवार्ड लिएर के गर्ने ?’
के गर्दैछन् आमिर ?
‘चपली हाइट ३’ मा स्वस्तिमा र महेशको जोडी
रुचाइयो ‘लभ डायरीज’